प्रविधि मेलामा यसरी ‘होस्टेल रिटर्न्स’ को प्रचार गरिदैँ…! « Mazzako Online
प्रविधि मेलामा यसरी ‘होस्टेल रिटर्न्स’ को प्रचार गरिदैँ…!
मज्जाको अनलाईन समाचार, काठमाण्डौं, माघ १४–
जुन फिल्मको प्रचारप्रसार बलियो हुन्छ, त्यो फिल्म चल्ने सम्भावना पनि त्यत्ति नै बढी हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै निर्माता सुनिल रावलले वैशाख २५ देखि प्रदशर्नमा आउने आफ्नो फिल्म ‘होस्टेल रिटर्न्स’ को प्रचारप्रसार तीन महिना अघि देखि नै शुरु गरिसकेका छन् । इन्जिनियरिङका विद्यार्थी र होस्टेल जीवनको कथा भएकाले उनले यो फिल्मको प्रचारवाजी विशेष गरि शैक्षिक संस्थालाई ‘टार्गेट’ गरेर अघि बढाइरहेका छन् ।